सुबिन भट्टराईले फिल्म निर्देशन गर्ने ! - Seven Nepal
सुबिन भट्टराईले फिल्म निर्देशन गर्ने !
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २३, २०७५ समय: ११:०१:१६
युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय लेखक सुबिन भट्टराईले ‘समर लभ’, ‘साया’, ‘प्रिय सुफी’, ‘मनसुन’ जस्ता सफल पुस्तक लेखिसकेका छन् । उनका हरेक नयाँ पुस्तकको युवापुस्तामा व्यग्र प्रतिक्षा हुने गर्दछ । अहिले उनी नयाँ पुस्तक ‘प्रिय सुफी’ का कारण चर्चामा छन् । उनको चर्चित उपन्यास ‘समर लभ’ माथि फिल्म नै निर्माण भइसकेको छ । यही शुक्रवार फिल्म रिलिज हुँदैछ ।
अतितको भूमिकामा कलाकार आशिष पिया सुहाउँदो नभएको प्रतिक्रिया आफूले धेरै पाएको उनले आशिषकै अगाडि निर्धक्क बताए । उनी स्वयं पनि पात्र चयनमा सन्तुष्ट रहेनछन् । निर्देशक र कलाकारकै अगाडि उनले भने, ‘म लेखक भएका कारण पुस्तकको जस्तै चरित्र भेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, फिल्म हेरेपछि भने म पोजेटिभ छु ।’
पुस्तक पढेकाले भन्दा नपढेकाले फिल्मबाट बढी मनोरञ्जन लिने सुबिनको निष्कर्ष छ । ‘पुस्तक पढेकाहरु ‘जजमेन्टल’ हिसाबमा जान्छन् । कमी कमजोरीहरु बढी खोज्छन् । तर, पुस्तक पढेका वा नपढेका जो कोहीले पनि फिल्म रुचाउनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु’, उनले भने । उनी आफूलाई पुस्तकसँगै फिल्म लेख्ने चाहना पनि अत्याधिक रहेको बताउँछन् ।
‘फिल्मतिर मेरो ‘इन्ट्रेस्ट’ एकदमै छ । मलाई पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि फिल्मका लागि कथा लेख्ने चाहना थियो । केही लेखेँ पनि तर त्यसै थन्किए’, उनले अगाडि भने, ‘भोलीका दिनमा अफर आयो भने फिल्मका लागि पनि कथा लेख्छु ।’ उनले भविष्यमा आफैंले फिल्म निर्देशन गर्ने सोचमा रहेको पनि बताए ।
‘फिल्म निर्देशन गर्ने सोचमा समेत छु तर त्यो कहिले पूरा हुन्छ थाहा छैन । तर, हतार भने गर्दिनँ’, उनले भने । विस्तारै फिल्म क्षेत्रका व्यक्तिसँग संगत बढिरहेको बताउँदै उनले आफूले फिल्मका लागि थुप्रै कथाको खेस्रा तयार पारेको पनि बताए । सुबिनमा अब फिल्मको स्क्रिनप्ले र पुस्तक लेखनलाई एकसाथ लैजाने सोच छ ।